Infinality: Waxay hagaajineysaa noocyada farta Debian | Laga soo bilaabo Linux
Infinality: Ku hagaaji noocyada farta Debian
Hagaha aan hoos ku muujiyo waa la qabsashada asalka ee aan kari karno halkan ka akhriso, halka ay ina tusayso sida loo abuuro baakado (.deb) taas oo noo oggolaan doonta inaan kor u qaadno muujinta iyo muuqaalka ilaha laga helayo Debian GNU / Linux.
Talaabooyinka aan hoosta ku muujiyo waxaa si guul leh loogu tijaabiyay Debian Wheezy 64 Bits
Ku rakibidda ku-tiirsanaanta
$ sudo aptitude rakibi-dhisme muhiim ah docbook-to-man libx11-dev x11proto-core-dev libz-dev quilt debhelper pdebuild-cross
Tani waxay rakibi doontaa xirmooyin badan, laakiin waxba, markaan dhammeyno mar kale ayaan ka saari karnaa. Marka dhammaantood la rakibo, waxaan rakibnaa git-core:
$ sudo karti u rakib git-core
Markaan intaas oo dhan ku dhammeysano, qeybta hoose waxaan dhignaa:
$ git clone https://github.com/chenxiaolong/Debian-Packages.git $ cd Debian-Xirmooyinka / $ cd freetype-infinality / $ dpkg-checkbuilddeps $ cd ../fontconfig-infinality/ $ dpkg-checkbuilddeps
Maxaan ku qabanaa dpkg-jeeg-dhisaha waa inaan hubinno inaannaan u baahnayn ku tiirsanaan. Hagaag, haddii wax waliba caadi yihiin, waxaan aadeynaa tallaabada xigta:
Qoraalladaani waxay soo dejinayaan xirmooyin aan ka badnayn 2MB waqti badanna kuma qaataan inay socdaan. Markay dhammeeyaan, waxaan abuuri doonnaa daruuriga lagama maarmaanka ah, oo aan ku rakibno:
Waana taas. Waxaan dib u bilaabi doonaa markii aan mar kale marino waxaan arki doonaa isbeddelada.
Nasiib darrose kamaan qaadin shaashadda ka hor inta aan sidan sameynin sidaa darteed ma muujin karo kala duwanaanshaha, laakiin igu kalsoonow xarfaha Chromium ee had iyo jeer qasan hadda waxay u muuqdaan kuwo aad u qurux badan
Qofkii adeegsada Debian Wheezy 64 Xabo oo aanan rabin inaan ku bixiyo dhammaan shaqadan, waxaan uga tagayaa kaygii
U soo dejiso .debs-ka amd64
Cusboonaysiinta: Mahadsanid elenddilnarsil Waxaan arki karnaa Kahor iyo Kadib:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Infinality: Ku hagaaji noocyada farta Debian
aad u wanaagsan, laakiin maya kahor iyo kadib shaashadaha isha?
Nasiib darrose maahan .. Sikastaba haddii elendilnarsil wax walba u sameyso si wanaagsan, waxaan u adeegsan karnaa tusaalahaaga boostada .. Sax sax ah elendilnarsil?
XDD, illaa iyo hadda waxaan ogahay faallooyinka. Dabcan!
WAAD KU MAHADSAN TAHAY JINSIYADA !!!!!!
Waa salaaman tahay, waxaan doonayey inaan ogaado haddii (sida muuqata la cadaadiyey) Debian-Packages galka loo soo bandhigi karo si loo soo dejiyo maxaa yeelay qaarkeen kamid ah ma heli karno meel bakhaar git ah oo wakiil ka ah anaguna kuma shaqeyno 64 bit. Waad ku mahadsantahay horay. Salaan.
Ku jawaab philos
Hada xoogaa waan isku murugsanahay, laakiin goor dambe ayaan galka galinayaa ama haddii aan awoodo, waxaan u dirayaa cinwaanka emaylkii aad ka faalloon jirtay.
Tijaabinta, waan faalloon doonaa oo waan soo dejin doonaa sawirro.
Wuu i siiyay digniin mana ii sii daayo inaan sii wado: "dpkg-checkbuilddeps: dhiso ku tiirsanaanta kuma qanacsana: dockbook-to-man"
Kaliya waxaan maray nidaamka rakibaadda oo xirmadaas (docbook-to-man) waa la la'yahay.
Khaladkeyga. Waa inaan si khaldan ugu guuriyay maqaalka, hadday tahay, laakiin si liidata loo qoray .. Hadda waan hagaajinayaa. Xirmada waa docbook-to-man.
Soo dejiso miisaskaaga runtiina waxay tahay in ilaha ay ka fiican yihiin, in kastoo bilowgiiba ay ahayd inaan dib u qaabeeyo. Hadda wax walba oo qumman iyo 100
Sidaad dib u qaabeysay?
Xulashada nidaamka Kde, maxaa yeelay waxay umuuqatay wax yar oo qariib ah
Si aad u wanaagsan,
Waxaa jira qeexitaan kafiican ilaha, waxayna dareemayaan dhereg badan. In kasta oo ay ahayd inaan dib-u-cusbooneysiiyo nidaamka markii labaad, sababtoo ah runtii way gaabisay.
Jidka Elav, waa maxay waxaas oo dhan oo la baabi'in karo?
Waa hagaag waxaan u maleynayaa in tirtirida isla .deb inaad wax ku celisay meeshiisii ​​😀
Miyuu noqon doonaa galka Debian-Packages, oo ku yaal faylka shaqsiyeed?
Ah, si fiican markii aad samaysato .deb-kaaga, waad tirtiri kartaa galka oo dhan haddii aad rabto .. Taasi waxba ma go'aamineyso.
Waxaan kaliya ku daray feyl .font (ama wax la mid ah, hada waxaan la socdaa laptop-ka oo leh daaqado mana hubin karo) galka guriga oo wax badan baa hagaagaya, waxay u egtahay sida qaybinta ubuntu oo kale. Iyo iyada oo aan wax rakibin, kaliya feyl qoraal ah
elav hadda waxaad dhahdaa ma ogaanaysid farqi maxaa yeelay sidan xad dhaafka ah waxay noqonaysaa cawskii ugu dambeeyay.
http://www.infinality.net/blog/infinality-repository/ <- repo ee asxaabteyda Fedorian
waad mahadsantahay, maxaa yeelay daahir .deb .deb .deb iyo inbadan .deb.
Arch iyo derivies sidoo kale waxaa ku yaal: http://deblinux.wordpress.com/2013/03/02/tip-mejora-y-mucho-el-renderizado-de-fuentes-en-manjaro-linux/
Tilmaam wanaagsan, laakiin waxaan doorbidaa noocyada aan haysto asal ahaan (ugu yaraan way ka fiican yihiin TrueType-ka ay Windows haysato oo xitaa lama akhrin karo).
Rakibay .deb (haa waan caajis ahay XD). Runtii waxay u egtahay mid kafiican, waad ku mahadsantahay soo galinta.
Waxaan ku tijaabiyay Debian Wheezy x86 laptop-ka oo leh shaashad yar oo dhawr inji ah, runtiina waxay tahay inay u muuqatay mid ka sii liidata ilaha aan dhammaadka lahayn marka loo eego kuwa sida caadiga ah ku yimaadda, markaa waa inaan iska fogeeyaa xirmooyinka si wax walbana sideedii bay ku noqon lahaayeen. Waxaan u maleynayaa inay kuxirantahay qalabka su'aasha laga qabo inay u muuqdaan kuwo kafiican ama ka xun.
Waad salaaman tihiin, waxaad qabanaysaan
Waxaan ka faalloonayaa daaqadaha 7 ra'yigayguna waa mid aad u wanaagsan 😛
hehe! .. Lol .. Ummm .. Waxaan jeclaan lahaa font Apple ka badan ama Ubuntu Dadka font 😛
Infinality ayaa ugu fiican.
Waxyaabo qosol badan oo aan gartay ilaa maanta: baarka menu-ka LibreOffice wuxuu umuuqday mid weyn. Laakiin sixitaankeedu wuxuu ahaa mid fudud.
Jidka Elav, waxaan qiyaasayaa in sababo la xiriira isbeddelada ay ku sameynayaan baloogga, desktop-ka mar dambe lama aqoonsana.
Xitaa ma aanan dareemin. Waa inaan weydiiyaa KZKG ^ Gaara.
Isbedel xagjir ah, waxay umuuqataa mid aad ugafiican hada. mahad badan.
Fikradayda, ugu yaraan Debian, muhiim maahan. Waxaan hayaa cashar buuxa oo ku saabsan mawduuca waana ku guuleystaa isla iyada oo aan lagu darin xirmooyinka dibedda ama keydka. Gaar ahaan haddii ay tahay Chrome / ium.
Debian-ka uma maleynayo inay lagama maarmaan tahay in la adeegsado tilmaantan, tan ugu dambeysay ee ku timaadda ima dhibayso. In archlinux haddaan gacanta u dhigo ilaha ..
Taariikh wacan ..
Waan kugu raacsanahay adiga, in kasta oo Arch uu haysto rakibe la mid ah tan OpenBSD (illaa hadda, rakibayaasha ugu caawinta badan ee aan ilaa hadda isticmaalay).
[Mawduuc Ka Bax]
Isticmaalayaasha Iceweasel markay ogaadeen in ukun-biyoodka "ku saabsan: iceweasel" aan laga helin 3, 2, 1 ...
[/ Mawduuca Ka Baxsan]
Aynu isku dayno, aan aragno sida ay u egyihiin… .mahadsanid horay
Waxaan ugu adeegsaday Slackware ... xarfaha waxay umuuqdaan kuwa fiican.
XFCE waa wax laga naxo, laakiin dhowr saacadood oo aan ku wareejinayo oo aan ku darno Infinality, waxaan ka soo jiidan karnaa wax wanaagsan, sida tan:
Ku jawaab Varacolacci
Sida loo soo dejiyo taxanaha adoo adeegsanaya flexget